ပလပ်စတစ် Extrusion | ထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း OEM ODM-plasticextrusionsupplier.com
လိပ်စာ: No.3, Yu 5th RD, Youth Industrial District, Taichia Town, Taichung Hsien, Taiwan
DAH SHAN PLASTICS CO., LTD. တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် ပလပ်စတစ် Extrusion, ပလပ်စတစ် Extrusions, ပလပ်စတစ်အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ် အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
တစ်ဦးကို client oriented ကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် ပလပ်စတစ် Extrusion ထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးဂန္စုဆောင်းရရှိနိုင်ပါစေ။ ဤရွေ့ကားပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်အပြစ်ကင်းစင်စွာအသိအမှတ်ပြုဈေးကွက်စျေးသည်များကနေရင်းမြစ်နှင့်ဤစက်တွေရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံး-In-class ကိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်နည်းပညာထည့်သွင်းကြသည်အရည်အသွေးအစမျးသပျပစ်စညျးမြားကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းဖော်များကဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့များထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး check လုပ်ပေးပါတယ်။ ပစ္စည်းကိုအထဲကအချောထုတ်ကုန်ဖို့, ထုတ်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းကနေကျနော်တို့အမြင့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်အရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်သမျှသောခြေလှမ်းများ, ထိန်းချုပ်ဖို့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပလပ်စတစ် Extrusion ထုတ်ကုန်များအကွာအဝေးအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့် application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အကြမ်းခံသည်နှင့်စျေးကွက်ဦးဆောင်စျေးနှုန်းများမှာဖောက်သည်များအကြားချီးကျူ​​းသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားမှီခိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်သောအချိန်ဘောင်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းမှာစုစုပေါင်းဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျနော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အတူသာယာဝပြောတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်အလိုရှိ၏။
ပလပ်စတစ် Extrusion Profiles
ပလပ်စတစ် T ကမှို
PVC Cable ကို Tray ထဲမှာ